‘प्रमाण नष्ट’ गर्ने एसपी विष्टलाई सरकारले सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने ल्याकत राखोस् ! « News24 : Premium News Channel
‘प्रमाण नष्ट’ गर्ने एसपी विष्टलाई सरकारले सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने ल्याकत राखोस् !
काठमाडौं । कन्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तकाे बलात्कार एवं हत्याकाे घटनाले २ महिना नाघिसकेकाे छ । तर पनि हत्यारा को हो, अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
निर्मलाको न्यायका लागि सडकदेखि सदनसम्म तातिसक्दा र देशदेखि विदेशमा रहेका नागरिकबाट समेत अावाज उठिरहँदा प्रहरी प्रशासन र सरकार भने ‘असक्षम’जस्तै साबित भएकाे छ । हत्यारा पक्राउ पर्नु त कता हाे कता, घटनाकाे वास्तविक सर्वसाधारणलार्इ जानकारी गराउन समेत सरकार असफल देखिन्छ ।
बरू अनुसन्धानका नाउँमा घटनाकाे सम्पूर्ण प्रमाणसमेत नष्ट गरेकाे छ, मानौं प्रहरी प्रशासनकाे काम अपराधी पक्राउ गर्नेभन्दा पनि अपराध लुकाउने हाे । अहिलेसम्मका घटना शृंखलाबाट प्रहरी तथा सरकारी पक्षले घटना दबाउने उद्देश्य राखेको नियत देखिइसकेकाे छ ।
घटनास्थलमा प्रमाण जाेगाउनु र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुकाे सट्टा प्रमाण नष्ट गर्नतिर लागेकाे अाराेप लागेका तत्कालीन कन्चनपुर प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्टलाई सरकारले किन हिरासतमा लिन सकेन ? तमाम जनआक्रोश र दबाव थेग्न नसकेपछि त्यसलाई मत्थर पार्न घटनाकाे एक महिनापछि सरकारले एसपी विष्टलार्इ निलम्बन गरेतापनि उनले हत्याकाे प्रमाण लुकाउन गरेका कर्तुतका अगाडि यो सजाय नगण्य हाे ।
गत साउन १० गते साथी रोशनी बमको घरमा दिउँसो गृहकार्य गर्न गएकी निर्मला त्यहीबाट बेपत्ता भएकी थिइन् । बमको घर रहेकाे भन्दा केही पर भीमदत्त नगरपालिका १९ बागफाँटाको उखुबारीमा दोस्रो दिन मात्र निर्मलाको शव फेला परेको थियो।
छोरी निर्मला हराएकै दिन निर्मलाकी आमाले प्रहरीलाई खबर गर्दै हारगुहार मागे पनि प्रहरीले बेवास्ता गर्नुबाटै प्रहरीकाे नियत अनुमान गर्न सकिन्छ । तत्कालै खोजतलासमा कुनै चासो नदेखाउनु, घटनास्थललाई सुरक्षित राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा लाश धुनु, सुरुवाल धोएर प्रमाण नष्ट गर्नु, बचेका लुगा पनि जलाइनुलगायत हर्कतबाट प्रहरीकाे भूमिका सुरूदेखि नै शंकास्पद रहेकाे मान्न सकिन्छ । यसमा एसपी विष्टकै हात रहेकाे स्थानीयहरूले बताउँदै अाएका छन् ।
वास्तविक अपराधी सार्बजनिक गर्न माग गर्दै गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा एसपी विष्टले गोली चलाउन आदेश दिनु र थप निर्दाेष किशाेरकाे ज्यान लिनुले एसपी बिष्टको घटनाप्रतिकाे रहस्यमय संलग्नता झन रहस्यमय बन्दै अाएकाे छ ।
यी तमाम नजिर र अनुसन्धानकाे लागि गठन गरिएकाे उच्चस्तरीय छानबिन समिति समेतले पनि एसपी डिल्लीराज बिष्टले नै लापरबाही गरेको निष्कर्ष निकाल्दै गृहमन्त्रीलाई प्रतीवेदन बुझाइसकेको छ । यस अवस्थामा बिष्टलाई पदबाट निलम्वन मात्र गरीनु उनी माथिको कारवाही निकै नगण्य हाे र सरकार उनकाे पक्षमा नै रहेकाे अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि उनलाई यस घटनाभित्रको रहस्य सबै थाहा छ, तर सरकार किन उनलार्इ बर्खास्त नगरेर बसेकाे छ ? किन उनीमाथि गहिराे अनुसन्धान हुन सकेकाे छैन ? आखिर कुन स्वार्थको लागि यत्रो जघन्य अपराधलाई हल्का रुपमा लिएर राज्य, प्रशासन र प्रहरी नै दशी प्रमाण लुकाउन एवं वास्तविक अपराधी जाेगाएर निर्दाेष नागरिकमाथि अपराध थाेपर्न लागिपरेकाे छ ?